Xushmada fiidiyowga asxaabta webiga Mississippi
Barnaamijka McKnight's Mississippi River to Sunset
Tixraacyada 27 Sano ee Maalgelinta
Agaasimayaasha hay'adda 'McKnight Foundation' waxay si joogto ah u ilaalinaysay 27 sano oo dadaal ah oo ay ku ilaalinayso wabiga Mississippi iyo gacanka Mexico. Ballan qaadkaasi wuxuu ahaa aqoonsi taariikhda wabiga aan caadiga ahayn iyada oo diiradda la saaray bulshada, dhaqanka, wax soo saarka cunnada, iyo gaadiidyada kunka sano. Webiga wuxuu ahaa, welina sii ahaanayaa, mid qaddarin badan.
Dhaqanka Mareykanka ayaa mararka qaar ku dhaca inuu sharfo xurmada. Taasi waxay si xanuun leh u muuqatay 50 sano ka hor markii Webiga Cuyahoga uu dab qabsaday Cleveland. Dhacdadu waxay daaha ka qaadday xaalada xun ee webiyada America waxayna noqotay mid kaftan ka ah TV-ga habeen dambe. Dabkii Juun 1969 wuxuu biloowday markii uu tareenka ka soo tallaabayay biriij ku teedsan wasaqda saliidda qashinku daadisay ee webiga hoostiisa. Maaha markii ugu horraysay ee Wabiga Cuyahoga gubto. Waxay ahayd, si kastaba ha noqotee, kii ugu dambeeyay.
Deynta sawirka: Sean Gardner, Sanduuqa Ilaalinta
Dabkii 1969 wuxuu kiciyay dhaqdhaqaaq wadaniyadeed oo sii kordhaya kaasoo dhalisay abuurista Wakaalada Ilaalinta Deegaanka 1970 iyo marinka Sharciga Biyaha Nadiifka ah 1973. Sharciga Biyaha nadiifka ah (CWA) wuxuu qabtay shaqo cajiib ah oo adeegsanaysa qawaaniin iyo dhiirigalin dhaqaale si wax looga qabto Meelaha ay ka yimaadaan wasaqowga - warshadaha iyo dhirta bulaacadaha. Barnaamijka Mississippi River, oo McKnight la asaasay 1992, wuxuu taageeray dadaallada lagu cadaadinayo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada si loo xoojiyo CWA.
Guulihii hore ee nadiifinta biyaha wadankeena waxay na gaarsiisay marxaladdan hada murugada badan ee dib u soo celinta wabiga. Dhibaatada ugu weyn ee haysata caafimaadka wabiga hadda waa malaayiin hektar oo dhul beereed ah oo beddelaya qulqulka biyaha dabiiciga ah ee muuqaalka dhulka. Halkii ay si tartiib tartiib ah uga dhex dhici lahayd carrada carrada iyo yareynta wasaqda wasakhda ah ee dhul-daaqsimeedka, roobka ku da'aya dhul-beereedka badanaa waa la daadiyaa oo la daadiyaa, oo wata wasakhda iyo kiimikooyinka beeraha.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay McKnight culeyska koowaad wuxuu u weecday wax ka qabashada asalka u ah wasakhowga: nidaam beero iyo siyaasado u horseeday Midwest in dhul ballaaran oo ay ka mid yihiin dalagyada safka-gaaban ee kiimikada sida hadhuudhka iyo soybeanska. Waxaan ogaanay in fursadda ugu weyn ee ciidda iyo ilaalinta biyuhu ay kuxirantahay baahinta xariifnimada beeralleyda iyo taageeridda siyaasadaha iyo xoogagga suuqyada ee abaal-mariya waxqabadyada waara. Barnaamijku wuxuu diiradda saaray maalgashiyadii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa u doodista siyaasadda iyo wacyigelinta beeralleyda, iyo dhisidda rabitaanka dadweynaha iyo saameyn ku yeelashada wax soo iibsiga shirkadaha, si mudnaanta loo siiyo dhaqangelinta waxsoosaarka beeraha ee warshadaha.
“Waxaan uga mahadcelineynaa guddiga McKnight 27 sano ee taageerada dhowrista wabiga, waxaana si qoto dheer uga mahadcelineynaa kalgacalka iyo balanqaadka boqolaalka shaqsiyaadka iyo ururada ee iskaashaday McKnight si loo wanaajiyo carrada Midwest iyo biyaha, Wabiga Mississippi, iyo Gacanka Mexico. ” –KA MULLER, MISSISSIPPI BARNAAMIJKA RIVER EE DUGSIGA
Dadaalladan ayaa bixinaya. Magaalooyinka kor iyo hoos webiga dib ayey ula qabsadeen horumarka wabiga dhiniciisa, welina waan joogsadaa anigoo ka yaabiyey arag gorgor u eg oo webiga agtiisa ag jooga xafiiska McKnight. Caafimaadka carrada ayaa noqday mid ka mid ah mowduucyada ugu wanaagsan ee beeraha, iyo in beeralleyda ay ku soo dhaweenayaan dhaqanka dhowrista leh kalgacal cusub. Macaamiisha ayaa dalbaya in la sii wado dhaqangelinta biyo badan, iyo shirkadaha beeraha ee ku jira silsiladda sahayda ay u hoggaansamayaan.
Ahmiyadaha cusub, jihada cusub
In kasta oo aan ku hanweynahay diiradda barnaamijka 'Mississippi River' ee McKnight, haddana waxaan ku faanayaa, sidoo kale, ballanqaadka Mu'asasada ee ahmiyad siinta ahmiyad siinta walaacyada bulshada iyada oo loo marayo Qaab-dhismeedkeeda cusub ee Istiraatiijiyadeed. Gudiga agaasinka McKnight wuxuu ku qasbanaaday inuu sameeyo go'aano badan oo adag natiijada dib ugu laabashada xeeladaha hay'adda samafalka.
Iyada oo qayb ka ah geeddi-socodkaas, guddiga ayaa dhowaan go'aansaday inuu qorrax u dhacayo barnaamijka wabiga Mississippi; Nofeembar waxay astaan u noqon doontaa barnaamijkii ugu dambeeyay ee deeqaha cusub. Bilaha soo socda, shaqaalaha McKnight waxay bixin doonaan deeq kordhin iyo fududeynta kala-guurka deeq-bixiyeyaasha. Waxaan sidoo kale ku talo jirnaa inaan u dabaaldegno 27 sano guulaha aan caadiga aheyn ee ay gaareen deeq-bixiyeyaasha iyo wada-hawlgalayaasha, oo aan uga mahadcelineyno iskaashiga badan ee muddada dheer soo jiray.
U dhaqaaqista Hore
Beeraha Mississippi iyo Beeraha-dhexe ayaa ku yaal meel aad uga duwan 27 sano ka hor.
Laakiin waxaan ognahay inay jiraan waxyaabo badan oo la qaban karo. Su’aal kama taagna in kor u qaadista dhaqamada isticmaalka dhul beereedka ay yareyn karaan qiiqa gaaska iyo in ay ka caawiyaan beeraleyda inay la qabsadaan jawiga isbeddelaya, sida ay hoosta ka xariiqday warbixin dhowaan kana yimid Golaha Caalamiga ah ee Isbedelka Cimilada.
Deeqbixiyaasha McKnight ee Mississippi River way dalban karaan deeqaha hoos yimaada la ballaariyey barnaamijka Cimilada & Tamarta Midwest ama barnaamij cusub oo ku wajahan bulshada haddii ay ku habboon yihiin tilmaamaha, kaas oo lagu dhawaaqi doono deyrta 2020.
Waxaan dhihi doonnaa waxbadan inta go'aannada geeddi-socodka la sameeyo ee ku saabsan qorrax dhaca qoritaanka barnaamijka Wabiga Mississippi. Tusaale ahaan, waxaan haynaa tiro badan oo aragtiyo deeq-bixiyeyaal qiimo leh oo ku saabsan wixii shaqeeyey iyo waxa aan u ahayn wadista ciidda iyo ilaalinta biyaha. Waxaan ku talo jirnaa inaan uruurino fikradahan hab aan u taageerno shaqada sii wadata ee horumarineysa caafimaadka Mississippi River.
Julia, Sam, iyo waxaan sugeynaa inaan la shaqeyno deeq bixiyaasha iyo la-hawlgalayaasha si aan ugu fududaato kala-guurka ugu macquulsan intii suurtagal ah. Waxaan uga mahadcelineynaa guddiga McKnight 27 sano ee taageerada dhowrista wabiga, waxaana si qoto dheer uga mahadcelineynaa kalgacalka iyo balanqaadka boqolaalka shaqsiyaadka iyo ururada ee iskaashigooda la sameeyay McKnight si loo wanaajiyo carrada Midwest iyo biyaha, Webiga Mississippi, iyo Khaliijka. ee Mexico.
Mawduuca: Webiga Mississippi
Webiyaasha ugu halista badan Mareykanka ee 2020
Mahadcelinta Barnaamijka McKnight ee Mississippi Webiga
By Mark Muller Febraayo 2020
Rumaystayaasha Sinnaanta Sinaanta: Kobcinta Beerta Sinnaanta